१३ वर्षमै बच्चा : किशोरी बुहारी बनेर घरमा, किशोर हिरासतमा
KATHMANDUTemperature 8°CAir Quality172
कानुन भन्छ- विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी भएको विवाह स्वत: बदर हुनेछ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । तर पीडित किशोरी बुहारी बनेर किशोरको घरमा बसिरहेकी छन् । र, किशोर जेलमा ।
१५ चैत्र २०७६ शनिबार
नवलपुरको हुप्सेकोट–१ सुन्दरबस्ती बेलुवाकी १३ वर्षीया किशोरीले २४ फागुनमा बच्चा पाइन् । घरनजिकैको शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा ७ कक्षामा पढ्ने ती किशोरी बच्चा पाउनु अघिल्लो दिनसम्म पनि विद्यालय गइरहेकी थिइन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यबहादुर भण्डारी ती किशोरीले बच्चा पाएको खबर सुन्दा नै छक्क परे ।
ती किशोरीलाई राती २ बजेदेखि ढाड दुख्ने र वान्ता भएको थियो । बिहान ६ बजे आमा र दाजुले उनलाई वडा–३ बेलहानीस्थित चौरंगी चोकको टीका मेडिकल पुर्‍याए । सो मेडिकल वडा–३ का वडाध्यक्ष छविलाल मिधुनको हो । उनी गाउँका सीएमए पनि हुन् ।
दाजु र आमाले मेडिकल लैजाँदा छविलाल दाँत माझ्दै थिए । आमाले भनिन्, ‘लौन ! छोरीलाई के भयो हेर्नुस् न ।’ त्यही बेला किशोरी ‘दिसा लाग्यो’ भन्दै शौचालय छिरिन् । केही क्षणमै चिच्याएर कराएको आवाज आयो । आमा दौडेर शौचालय छिर्दा दृश्य देखेर तर्सिइन् भने दाजु पनि तर्सेर कराए । आमाले के गरेकी यस्तो भनेर पनि कराइन् ।
यसैबीच वडाध्यक्ष छविलाल पनि हेर्न गए । आधा बच्चा बाहिर निस्केको थियो भने आधा भित्र । किशोरीले चर्पीमा अपांगता भएको मृतक बालक पाइन् । छविलालले ‘यस्तो उपचार गर्न सक्दिनँ’ भन्दै हजुरको सहकारी संस्थामा फोन गरे । त्यतिबेलासम्म किशोरीलाई
बेडमा राखिएको थियो ।
बालिकाले बच्चाको बाबुको नाम बताइसकेकाले १५ वर्षीय किशोरको बुबाआमालाई ल्याउन छविलालले किशोरी बस्ने वडा– १ का वडा सदस्य लालबहादुर शेरपुर्जालाई फोन गरे ।
लालबहादुरका अनुसार दुवैका बाबुआमा र गाउँले जम्मा भएपछि किशोरीलाई किशोरको घरमा भित्र्याइयो । मृत बच्चालाई सुन्दरबस्तीकै जंगलमा गाडियो । बालिका अहिले किशोरको घरमा बुहारी भएर बसेकी छन् भने किशोर १२ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । पूर्वएमालेबाट जितेका छविलालका छोराले जबर्जस्ती करणी गरी गर्भपतन गराएको आरोप पनि छ ।
घटनाबारे प्रहरीसँग बुझ्न खोज्दा डीएसपी मोहन खाँड किशोरलाई हिरासतमा राखेको मात्र बताउँछन् । नाबालक भएकाले मुद्दाबारे कसैलाई बताउन नमिल्ने उनको तर्क छ । पीडित किशोरी भने ती किशोरसँग ५ वर्षदेखि प्रेममा रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, “सानैदेखि नै सँगै खेलेर हुर्केको । त्यसैले लभ पर्‍यो ।”
किशोरीसँग कुरा गर्दा उनकी सासू पनि सँगै थिइन् । टेलिफोन सम्पर्कमा गरिएको कतिपय प्रश्नका उत्तर किशोरीलाई सिकाएजस्तो लाग्थ्यो । मेडिकलमा बच्चा पाउँदा किशोरीले हिसाब गरेजस्तो सहजै बताइन् । भन्छिन्, “अलिकति बल गर्नेबित्तिकै बच्चा जन्म्यो ।”
छविलाल पनि मेडिकलमा कुनै औषधी नदिएको दाबी गर्छन् । तर लालबहादुर मेडिकल पुग्दा बच्चालाई प्लास्टिकमा बेरेर राखिएको थियो । छविलालको दाबीलाई उनले इन्कार गरेका छन् ।
घटना हुँदाको दिन शनिबार भएकाले गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे वडा– २ को अनौपचारिक भेटघाट कार्यक्रममा थिइन् । नेपाली कांग्रेसबाट जितेकी जनप्रतिनिधि लक्ष्मी गाउँमा जघन्य अपराध घटेछ भन्दै ३ बजे एसपी दीपकराज जोशीलाई खबर गरेको बताउँछिन् ।
लक्ष्मीका अनुसार किशोरीलाई पहिले भरतपुर सरकारी अस्पताल र त्यसपछि भरतपुर सामुदायिक अस्पताल लगियो । दुवै ठाउँमा पीडितलाई जाँच्न नमानेपछि अन्तत: पुरानो मेडिकल कलेजमा भिडियो एक्सरे भयो । दुवै अस्पतालमा पीडितलाई उपचार गर्न नमान्‍नुको स्पष्ट कारण अध्यक्ष लक्ष्मीसँग छैन । उनले किशोरी स्वस्थ रहेको दाबी गरे पनि अस्पतालबाटै रिपोर्ट नआएको स्रोतले बतायो ।
किशोरी आफ्नै मर्जीले घरमा बसेको किशोरकी आमाको दाबी छ । किशोरका आमाबुबा पथरी खोलामा गिट्टी कुट्ने काम गर्छन् । किशोरीका बुबा पनि घर बनाउने ज्यामी हुन् । दुवै परिवार दलित समुदायका हुन् । अध्यक्ष लक्ष्मी पीडितका बुबाआमाले ‘हामी गरिब छौँ, मुद्दा–मामिला जान्दैनौँ’ भनेपछि मेलमिलाप गरेर समस्या सल्टिएको बताउँछिन् ।
गाउँ प्रमुख लक्ष्मी किशोरीको दिदीले पनि करिब ६ महिनाको गर्भ बोकेको भन्दै घटनालाई सामान्य पार्न खोज्छिन् । उनका अनुसार किशोरीको असारमै मासिकस्राव सुरु भएको थियो । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेकोबारे समेत किशोरी अनभिज्ञ छिन् । अबउप्रान्त स्कुल नजाने र किशोरकै घरमा बस्ने किशोरी बताउँछिन् ।
लालबहादुर र छविलालले वडा–१ को कार्यालयमा दुवैका आमाबुबालाई बोलाएर मेलमिलाप गरेको प्रधानाध्यापक भण्डारीको भनाइ छ । प्रधानाध्यापकले किशोरीको स्वास्थ्य धरापमा नपारौँ भन्दै बारम्बार ताकेता गर्दा पनि परिवार र सम्बन्धित व्यक्तिले खासै चासो नदेखाएको गुनासो गर्छन् ।
लालबहादुर भने आफू स्थानीय निकायको मेलमिलापकर्तासमेत भएकाले हरिबहादुर परियार, ज्योति लाल र नरमाया गुरुङसहित दुवैको परिवार राखेर मेलमिलाप गराएको तर्क गर्छन् । तर कागजमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको उनको दाबी छ । भन्छन्, “केटा–केटी र दुवैको परिवारले एकअर्कालाई स्वीकारेपछि हामीले के भन्‍ने हो र ? तर आधिकारिक मेलमिलाप गराएको होइन । २० वर्ष कटेपछि बिहे गर्ने सहमति भएको छ । मुद्दा कतै दर्ता गरेको छैन ।
प्रधानाध्यापक भण्डारीका अनुसार ८ कक्षा पढ्ने किशोरले गत वर्ष नै विद्यालय छाडेका हुन् । तर लालबहादुरले भने किशोरले हिरासतमै बसेर ८ कक्षाको जाँच दिइरहेको बताउँछन् । प्रहरीले अनुसन्धानमा केही कुरा नबताउने अनि पीडित परिवार आर्थिक रूपले निकै नै कमजोर भएको र कानुनी प्रक्रिया केही थाहा नभएकाले समस्या झन् बल्झिएको छ ।
यस्तै, बच्चा गाडेकै दिन मुचुल्का उठाउनुपर्छ भन्दै आएको प्रहरीले गाडेको ठाउँबाट बच्चा निकालेर सदरमुकाम कावासोती लगेको थियो । भोलिपल्ट २५ फागुनमा गिरफ्तार गरिएका किशोरमाथि प्रहरीले यौन शोषणको मुद्दा लगायो । लालबहादुरले नै त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अर्को किशोरलाई पनि प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो । ती नाबालक किशोरीकै दिदीलाई गर्भाधान गराएको आरोपमा समातिएको लालबहादुर बताउँछन् । पीडित किशोरी केही दिनपछि नै किशोर घरमा आउनेमा ढुक्क देखिन्छिन् ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार यसमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ र मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ आकर्षित हुन्छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ को परिच्छेद २ मा बालबालिकाको अधिकारअन्तर्गत ७ मा संरक्षणको अधिकार छ । परिच्छेद ८ को (ज) मा बालयौन शोषण गर्ने वा गराउनेलाई कारबाही हुने उल्लेख छ । परिच्छेद ५ को उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई सम्भव भए बालमनोविज्ञ वा बालहितसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ अनुसार परिच्छेद ११ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी भएको विवाह स्वत: बदर हुनेछ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यी कानुनका बाबजुद पनि पीडित किशोरी बुहारी बनेर किशोरको घरमा बसिरहेकी छन् । पीडितको मञ्जुरीले यौन सम्बन्ध भए पनि त्यो गैरकानुनी हो । उनको स्वास्थ्यस्थितिबारे स्पष्ट रिपोर्ट कसैसँग छैन ।
छविलालले सुरुमा पीडितको उपचार गराएकाले प्रहरीले कारबाही गर्नुको सट्टा घटनालाई लुकाउन खोजेको स्पष्ट छ । किशोरलाई प्रहरी हिरासतमा मनोचिकित्सकको परामर्शबिना राख्नु कति उचित छ ? त्यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा सदस्य र वडा अध्यक्षले पीडित किशोरीको स्वास्थ्यभन्दा पनि घटना लुकाएर मेलमिलाप गराएको देख्दा पदको दुरुपयोग भएको आशंका छ ।